तिथि मेरो पत्रु » एकल महिला लागि शीर्ष अमेरिकी शहरहरु
एकल महिला लागि शीर्ष अमेरिकी शहरहरु
एकल महिलाका लागि उपयुक्त ठाउँ बनाउन केही कारणहरू पनि छन्; ह्याङ ठूलो ठाउँमा, राम्रो वेतन, देख राम्रो र रोचक एकल मान्छे, स्वस्थ खाना पक्कै तिनीहरूलाई केही हो. यी महिलाहरु बाँच्ने रोजेको सहरहरूमा कारक को बहुमत हुनुपर्छ भने सबै. तपाईं तल पाउनुहुनेछ एकल महिला लागि माथि अमेरिकी शहर को सूची यस्तो कारक को एक सीमा विचार तयार गरिएको छ.
1. शिकागो: यहाँ, महिला सिद्ध महानगर जीवनशैली आनन्द उठाउन सक्छौं; यो साँच्चै जीवंत शहर हो, तर न्यूयोर्क शहर जस्तै घमण्डी छैन. Chitown, स्थानीय रमाउँछन् शहर भनेर भन्छौँ रूपमा, प्राकृतिक सुन्दरताको केन्द्र हो, संस्कृति र इतिहास. तपाईं यस शहर मा भइसकेपछि, तपाईं बस यसलाई छोड गर्न घृणा गर्नेछन्; यो आधुनिक टोलमा र भव्य किनार संग लादेन छ.
त्यसैले, कसरी राम्रो एकल महिला लागि ठीक शिकागो छ? Oprah Winfrey, यस ग्रह मा सबै भन्दा सुप्रसिद्ध एकल महिला, यहाँ बस्ने; यस तपाईं जिउन को लागि शहर पर्याप्त रोमाञ्चक छ भनेर वाणी गर्नुपर्छ.
2. लस एन्जलस: तपाईं एक एकल महिला रूपमा पूर्ण गर्न जीवनको आनन्द उठाउन चाहन्छौं भने, तपाईं लस एन्जलस जीवित विचार गर्न सक्छौं. यो रहस्यमय भूमि-राम्रो देख र सुरुचिपूर्ण मानिसहरू भरिएको छ; यति, तपाईं यहाँ हो एक पटक, रोचक कसैले भेट्टाउनु एक समस्या हुने छैन बाहिरै गर्न.
शहर को अर्को ठूलो प्लस यो वर्ष माध्यम सबै प्राप्त अविश्वसनीय हावापानी छ. अनुकूल जलवायु सधैं उच्च आत्माहरुमा तपाईं राखन हुनेछ र तपाईंले काममा पछि प्राप्त समय को सबै भन्दा बनाउन ऊर्जा हुनेछ. त्यहाँका. समुद्र तट मार तपाईं सपिङ्ग गर्न celeb sightings देखि सबै गरौं हुनेछ.
3. बोस्टन: एकल महिला बावजूद उमेर समूह को स्वागत तिनीहरूले हौं बोस्टन पाउन. विद्यार्थीहरूको लागि, शहर तिनीहरू मा भर्ना गर्न सक्छन् जहाँ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरु छ. तपाईं सधैं किन्दै र प्रेम भने आधुनिक केहि लगाउने चाहनुहुन्छ, Newbury सडक त्यहाँ, डिजाइनर लुगा खरीद लागि एक आदर्श स्थान.
तपाईं घूम र मजा प्रेम गर्नेहरूको एक हो भने, शहर धेरै ऐतिहासिक सडकमा छ, सङ्ग्रहालय, ग्यालरीमा, स्थलहरूमा र पार्क.
4. स्यान डिएगो: स्यान डिएगो सधैं तपाईं कहिल्यै भर आउनेछ सबैभन्दा विस्मयकारी साइटहरु केही होस्टिंग एक शहर भएको छ. त्यसैले, तपाईं एक हो र आफ्नो जीवनमा केही मनपर्ने क्षण चाहनुहुन्छ भने, तपाईं स्यान डिएगो गर्न बढिरहेको विचार गर्न सक्छौं.
शहर प्रशान्त महासागर घेरिएको छ, मरुभूमि र पहाड; यसको अर्थ, यो डेटिङ लागि जान उपयुक्त ठाउँमा आउँदा, देखि चयन गर्न प्रशस्त विकल्प हो. स्यान डिएगो एक साँच्चै हलचल Downtown घर पनि छ.
5. लास भेगास: तपाईं लास भेगास हो भने एक उपयुक्त साथी रही तपाईंको संभावना शायद उच्चतम छ. एक अनुसार 2013 लेख फोर्ब्स मा प्रकाशित, यस Nevadan शहर यो बाँचिरहेका हरेक एक महिलालाई एकल मानिसहरूको उच्चतम संख्या छ; हरेक एक महिलालाई, शहर छ 1.34 तर. शहर को यो सुविधा एकल महिला लागि माथि अमेरिकी शहर को यस सूचीमा लास भेगास5औं प्रवेशी बनाउँछ.
माथि शहर को कुनै पनि मा बसोबास गर्न एकल र योजना हो जो बाहिर त्यहाँ सबै महिला पक्कै एक घोडा जीवन हुनेछ.
आफ्नो पाल्तु जनावर संग कार द्वारा यात्रा